Owbaaduu Oo Lagu Dilay Howlgal Ka Dhacay Degmada Afgooye. – Bogga Calamada.com
Owbaaduu Oo Lagu Dilay Howlgal Ka Dhacay Degmada Afgooye.
Ciidamada gaarka ah ee xarakada Mujaahidiinta Al-shabaab waxay maantay degmada Afgooye ee wilaayada Sh/hoose ku dileen xubin sare oo ka tirsanaa hayadda sirdoonka iyo nabadsugidda dowladda Ridada federaalka.
Howlgalkan gaarka ah oo ka dhacay gudaha degmada Afgooye ee wilaayada Sh/hoose waxay ciidamada Mujaahidiintu ku dileen xubin ka tirsanaa jawaasiista dharcadda ee ka howlgalayay degmada Afgooye waxaana jaajuuska la dilay lagu magacaabi jiray Owbaaduu.
Jaajuuskan murtadka ah ayaa caan ku ahaa jaajuusidda dadka muslimiinta ah si gaar ah kowaada ay shacaa’irta islaamka ka muuqato, waxaana inbadan murtadkan kasoo qayliyay dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan degmada Afgooye.
Degmada Afgooye waxay labadii maalin ee lasoo dhaafay noqotay kawaanka jawaasiista dowladda Riddada, maalmihii lasoo dhaafay waxaa gudaha degmadan lagu dilay xubno kala duwan oo isugu jiray saraakiil iyo askar ka tirsanaa jawaasiista dharcadda kooxda Ridada Farmaajo.
Howlgalkan gaarka ah waxa uu kusoo beegmayaa xilli saacadihii lasoo dhaafay weerar qorsheysan oo ciidamada Mujaahidiinta ay ka fuliyeen guri kuyaal deegaanka Daarusalaam ee dhaca duleedka magaalada Muqdisho ku dileen hal askari oo murtad ah iyo dhaawaca 3 kale.